မြန်မာ့နံပါတ်တစ် အိမ်ခြံမြေ Portal နှင့် အရှေ့တောင်အာရှ ထိပ်တန်း အိမ်ခြံ မြေနည်းပညာကုမ္ပဏီတို့၏ ပလက်ဖောင်း တို့ကိုအသုံးပြု၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံး အိမ်ခြံမြေ ဆုပေးပွဲ အစီအစဉ်ကို အွန်လိုင်းမှကျင်းပ - YOYARLAY Digital Media and News
နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်၊ ကြာသပတေးနေ့တွင် အွန်လိုင်းမှ ကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာ ကျင်းပပြုလုပ် ခဲ့သော PropertyGuru Myanmar Property Awards in partnership with Shwe Property ဆုချီးမြှင့်ပွဲကြီးတွင် အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်း၏ နောက်ထပ်တစ်နှစ်တာ အောင်မြင်မှု များကို ဂုဏ်ပြုနိုင်ခဲ့သည်။
အများကမျှော်လင့်စောင့်စားနေ​သော ယခုနှစ်၏ မြန်မာ့အိမ်ခြံမြေ ဆုချီးမြှင့်ပွဲကြီးတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ထူးချွန်ပြောင်မြောက်သော ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း (၁၂) ခုထံ ဆုတံဆိပ်စုစုပေါင်း (၂၅) ခုကို ပေးအပ်ချီးမြှင့်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနားတွင် Capital Development Ltd. က ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်ဆု (၇) ဆုအနက် (၃) ဆုဖြစ်သည့် အကောင်းဆုံးဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းရှင်ဆု၊ အကောင်းဆုံး စီးပွားရေးသုံး ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းရှင်ဆုနှင့် အကောင်းဆုံး ဘက်စုံသုံးဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းရှင်ဆုများကို ဆွတ်ခူးခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် ဤကုမ္ပဏီကပင် မန္တလေးမြို့၏ပထမဆုံး Grade A အဆင့်ရှိ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းသုံးတာဝါဖြစ်သည့် Mandalay Financial Center ဖြင့် အကောင်းဆုံးရုံးခန်းအဆောက်အဦဆုကိုလည်း ဆွတ်ခူးသွားခဲ့သည်။
အကောင်းဆုံးဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်သစ်ဆုကို SCW Development Group Ltd က ရယူပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့သည်။ အဆိုပါ ကုမ္ပဏီသည် ၎င်း၏ Skysuites စီမံကိန်းအတွက် အမြင့်ဆုံးဆုများအနက် နှစ်ဆုဖြစ်သည့် အကောင်းဆုံး ကွန်ဒိုဆု (မြန်မာ) နှင့် အကောင်းဆုံး ဇိမ်ခံကွန်ဒိုဆုများကို ဆွတ်ခူးသွားခဲ့သည်။
Dagon International Limited ကလည်း အကောင်းဆုံး ရေရှည်တည်တံ့သည့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်ဆုနှင့် အကောင်းဆုံး စက်မှုလုပ်ငန်းဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ရှင်ဆုများကို ဆွတ်ခူးသွားခဲ့ပါသည်။ Elite World Trading Co., Ltd ကမူ ၎င်း၏ Imperial Clinic စီမံကိန်းအတွက် အကောင်းဆုံး ကျန်းမာရေးအဆောက်အဦဆုကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခြင်းနှင့်အတူ အကောင်းဆုံးလူနေမှုပုံစံ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်ဆုကိုလည်း ရယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည်။
Capital Development Ltd. ၊ Dagon International Limited ၊ Ayeyarwaddy Development Public Co., Ltd. နှင့် Sun Myat Tun Construction Co., Ltd. တို့ကလည်း လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ ထူထောင်ခြင်းအတွက် အထူးအသိအမှတ်ပြုဆု၊ CSR အတွက် အထူးအသိအမှတ်ပြုဆု၊ ESG အတွက် အထူးအသိအမှတ်ပြုဆုနှင့် ရေရှည်တည်တံ့သည့် ဆောက်လုပ်ရေးအတွက် အထူးအသိအမှတ်ပြုဆုအပါအဝင် အထူးဂုဏ်ပြုဆုများကို ဆွတ်ခူးသွားခဲ့သည်။
PropertyGuru Myanmar Property Awards in partnership with Shwe Property ဆုချီးမြှင့်ပွဲကြီးသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် မကြာသေးမီက မိတ်ဆက်ထားခဲ့သော စီမံကိန်းသစ်များကို အသိအမှတ်ပြုခြင်းအပြင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အရေးအပါဆုံး အထင်ကရ နေရာတစ်ခုကိုလည်း ဂုဏ်ပြုခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယခင်က ဗြိတိသျှကိုလိုနီအစိုးရ၏ ရုံးချုပ်နေရာဟောင်း ဖြစ်ခဲ့သည့် Secretariat Yangon (ဝန်ကြီးများရုံး) ကို ကျွမ်းကျင်စွာ ပြန်လည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့သည့် Anawmar Art Group သည် ဆုအမျိုးအစားသစ် ဖြစ်သည့် အကောင်းဆုံး ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ် ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ဆုကို ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့သည်။
PropertyGuru Myanmar Property Awards in partnership with Shwe Property ဆုချီးမြှင့်ပွဲကြီးသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ခေတ်မီတိုးတက်ဆုံး စက်မှုလုပ်ငန်းစီမံကိန်းများကိုလည်း ဂုဏ်ပြုနိုင်ခဲ့သည့် အခွင့်အခါတစ်ရပ် ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။Ayeyarwaddy Development Public Co., Ltd ကဆောက်လုပ်သော Pathein Industrial City သည် အကောင်းဆုံး မြို့နယ်ဆောက်လုပ်ရေးဆုကို ဆွတ်ခူးခဲ့ပြီး Dagon International Limited ကဆောက်လုပ်သော New East Dagon Industrial Estate က အကောင်းဆုံး စက်မှုလုပ်ငန်းဆောက်လုပ်ရေးဆုကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Company Limited က ဆောက်လုပ်သော Gyogone Housing Redevelopment က အကောင်းဆုံးအိမ်ရာဆု (မြန်မာ) နှင့် အကောင်းဆုံးအိမ်ရာဆုတို့ကို ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့သည်။
Meeyahta Development Limited ကဆောက်လုပ်သော Yoma Central သည်လည်း ဆောက်လုပ်ရေးဆု နှစ်ဆုဖြစ်သည့် အကောင်းဆုံးဘက်စုံသုံးအဆောက်အဦဆုနှင့် အကောင်းဆုံးလက်လီလုပ်ငန်းဆောက်လုပ်ရေးဆုတို့ကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ ဒီဇိုင်းဆုများ ကဏ္ဍတွင် ပြတ်ပြတ်သားသားအနိုင်ရရှိသူဖြစ်သည့် Factory to Home Company ကဆောက်လုပ်သော Woodland X Bar သည် အကောင်းဆုံး ဖျော်ဖြေရေးအဆောက်အဦး ဆုအပြင် အကောင်းဆုံး ဖျော်ဖြေရေး အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းဆုကိုပါ ဆွတ်ခူးခဲ့သည်။
PropertyGuru Myanmar Property Awards in partnership with Shwe Property ဆုချီးမြှင့်ပွဲကြီးသည် ယခုနှစ်တွင် အခြားထူးခြားသည့် မှတ်ကျောက် တစ်ရပ် ကိုလည်း စိုက်ထူထားနိုင်ခဲ့ပါသည်။ City Holdings Limited ၏ Group CEO ဖြစ်သူ ဒေါ်ဝင်းဝင်းတင့်သည် ယခုနှစ်အတွက် မြန်မာ့တစ်နှစ်တာ အိမ်ခြံမြေပုဂ္ဂိုလ်ဆုကို ရရှိခဲ့ပြီး ဤဆုကိုပထမဆုံး ဆွတ်ခူးရရှိသည့် အမျိုးသမီးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ ထူးချွန်သည့် ဤအမျိုးသမီးလုပ်ငန်းရှင်သည် ရန်ကုန်မြို့တွင် Supermarket တစ်ခုစတင်ဖွင့်လှစ်၍ မိသားစုလုပ်ငန်းအဖြစ် အစပျိုးခဲ့သော City Holdings Limited ကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်းလက်လီ ကုမ္ပဏီတစ်ခုအဖြစ် ကြီးထွားလာစေခဲ့သူဖြစ်သည်။
တစ်နှစ်တာ အိမ်ခြံမြေပုဂ္ဂိုလ်ဆုသည် PropertyGuru Property Report Magazine ၏ အယ်ဒီတာများက နှစ်စဉ်ရွေးချယ် ချီးမြှင့်သည့်ဆု ဖြစ်ပါသည်။ အမှီအခိုကင်းသည့် အကဲဖြတ်ဒိုင်လူကြီးများအဖွဲ့က ရွေးချယ်ချီးမြှင့်ခြင်းမဟုတ်သည့် တစ်ခုတည်းသောဆုလည်း ဖြစ်သည်။
PropertyGuru Myanmar Property Awards in partnership with Shwe Property ဆုချီးမြှင့်ပွဲကြီးသည် ကျန်းမာရေး သတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာသည့်အနေဖြင့် အခမ်းအနားအစီအစဉ်နှင့် ဆုချီးမြှင့်ခြင်းအတွက် အွန်လိုင်းမှ ကျင်းပသည့်ပုံစံကို အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ အရှေ့တောင်အာရှထိပ်တန်း အိမ်ခြံမြေနည်းပညာကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် PropertyGuru နှင့် မြန်မာ့နံပါတ်တစ် အိမ်ခြံမြေ Portal ဖြစ်သည့် Shwe Property တို့၏ ပလက်ဖောင်းတို့ကိုအသုံးပြု၍ ဤဆုချီးမြှင့်ဂုဏ်ပြုပွဲကြီးကို AsiaPropertyAwards.comနှင့် မိတ်ဖက်ရုပ်သံလိုင်းများမှ Virtual စနစ်ဖြင့် ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ပြီး ဆန်ကာတင်စာရင်းတွင် ပါဝင်ခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီများနှင့် စီမံကိန်းများ၏ စျေးကွက်ဖြန့်ကျက်မှုကို ချဲ့ထွင်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။
PropertyGuru Group ၏ CEO ဖြစ်သူ Hari V. Krishnan က “ယခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံက ဆုရရှိသူများနဲ့ ဂုဏ်ပြုဆုရရှိသူ အယောက်စီတိုင်းအတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ဆုရရှိသူအားလုံးဟာ အခက်အခဲများကို ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှု၊ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုတို့ကို ကိုယ်စားပြုနေကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်အတွက်ပေးအပ်ခဲ့တဲ့ ဆုတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ခေတ်ရှေ့အပြေးဆုံး ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းများနဲ့ သမိုင်းဝင်အမွေအနှစ်များကို အတူတကွပေါင်းစပ်ဂုဏ်ပြုနိုင် ခဲ့တဲ့အတွက် အထူးပဲနှစ်သက်အားရမိပါတယ်။ ဆုရရှိတဲ့စီမံကိန်းများအတွက် စျေးကွက်မြှင့်တင်ရေး ဖြန့်ကျက်ပြုလုပ်နိုင်မယ့် အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းတစ်ခုကို ဖန်တီးပေးခြင်းအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဆုချီးမြှင့်ပွဲအစီအစဉ်ဟာ မြန်မာ့အကောင်းဆုံး လုပ်ငန်းများကို ကမ္ဘာ့စင်မြင့်ထက် ပို့ဆောင်ပေးနေပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
PropertyGuru Asia Property Awards ၏ Managing Director ဖြစ်သူ Jules Kay က “၂၀၂၀ ခုနှစ်ရဲ့ PropertyGuru Myanmar Property Awards ဆုပေးပွဲကြီးဟာ Shwe Property ရဲ့ ပြည်တွင်းအိမ်ခြံမြေစျေးကွက်ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ PropertyGuru ရဲ့ ပြိုင်ဘက်ကင်းတဲ့ အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသတစ်ဝှမ်း နိုင်ငံတကာစျေးကွက်ဖြန့်ကျက်နိုင်မှုတို့ကို ပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အိမ်ခြံမြေစျေးကွက်အတွင်း အကောင်းဆုံးစံနှုန်းတစ်ခုကို ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို ဒေသတွင်း ထိပ်တန်းအိမ်ခြံမြေ ဆုပေးပွဲအစီအစဉ်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက အများလေးစားမှုရရှိထားတဲ့ အိမ်ခြံမြေ Portal တို့ရဲ့ ပေါင်းစပ်လုပ်ဆောင်မှုဟာ ယခုလို စိန်ခါ်မှု မြင့်မားတဲ့အချိန်တွေမှာ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့ အမှတ်တံဆိပ်ကို အများမြင်သာ နိုင်စေဖို့ လိုအပ်နေတဲ့ အထောက်အပံ့ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
Shwe Property ၏ CEO ဖြစ်သူ Justin Sway ကလည်း “ဒီဆုပေးပွဲကြီးကို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးကျယ်အခမ်းနားဆုံးဖြစ်အောင် PropertyGuru နဲ့ လက်တွဲလုပ်ဆောင်ထားနိုင်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ ဝမ်းသာမိပါတယ်။
ဆောက်လုပ်​ရေးလုပ်ငန်းကြီး အသီးသီးဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ်ရဲ့ အနာဂတ်အိမ်ခြံမြေရောင်းချမှုအခွင့်အလမ်း တွေကို မဟာဗျူဟာကျ ထည့်သွင်းစဉ်းစားနေကြတယ် ဆိုတာကိုမြင်ရတာ အင်မတန်မှကောင်းပါတယ်။ မြန်မာ့နံပါတ်တစ် အိမ်ခြံမြေ Portal နဲ့ အရှေ့တောင်အာရှထိပ်တန်း အိမ်ခြံမြေ Portal တို့ရဲ့ ပူးပေါင်းမှုကြောင့် စျေးကွက်မြှင့်တင်ရေး ဖြန့်ကျက်နိုင်မှုကတော့ သူမတူအောင်ပါပဲ။ ဒီပူးပေါင်းမှုက စျေးကွက်အတွင်း မကြုံဖူးတဲ့ ဖြန့်ကျက်မှုကို ရရှိစေပါတယ်။ နိုင်ငံအတွင်းသာမက နိုင်ငံတကာက အိမ်ခြံမြေရှာဖွေနေသူများစွာ မြင်သာအောင်၊ သူတို့ကိုလက်လှမ်းမီအောင် ကူညီပေးနိုင်တဲ့အတွက် ဝယ်ယူသူများစွာဆီက အမြင့်ဆုံးရောင်းအားကို ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောကြားသွားခဲ့ပါသည်။
ယခုနှစ်၏ ဆန်ကာတင်စာရင်းကို အမှီအခိုကင်းသည့် အကဲဖြတ်ဒိုင်လူကြီးမင်းများအဖွဲ့က စိစစ်ရွေးချယ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး Executive Director နှင့်အကြံပေးဖြစ်သူ Joe Yew Chi Jee ၊ Senior Manager ဖြစ်သူ Hong Shi Ying နှင့် Senior Executive ဖြစ်သူ Thin Thinzar Ko တို့ပါဝင်သော မြန်မာနိုင်ငံရှိ BDO အဖွဲ့က ကြီးကြပ်သည့် ဘက်မလိုက်သော၊ ပွင့်လင်းမြင်သာသော အကဲဖြတ်စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ထားပါသည်။
အမှီအခိုကင်းသော အကဲဖြတ်အဖွဲ့တွင် ဆုချီးမြှင့်ပွဲဥက္ကဌနှင့် Emerson Real Estate ၏ Managing Director ဖြစ်သူ Richard Emerson ၊ Stephenson Harwood LLP မှ Senior Associate ဖြစ်သူ Ben Hickson ၊ Your Property Finder Company Ltd ၏ Managing Director ဖြစ်သူ Charm May Thu ၊ Allen & Overy Limited မှ Senior Associate ဖြစ်သူ Josh Htet ၊ Asean Real Estate Network Alliance (ARENA) ၏ ဥက္ကဌနှင့် Myanmar Real Estate Services Association (MRESA) ၏ President ဖြစ်သူ Khin Maung Than ၊ Archetype Group, Myanmar ၏ Managing Director နှင့် Architectural Design Director ဖြစ်သူ Mark Petrovic ၊ Creative Fox Design & Build Co., Ltd ၏ တည်ထောင်သူ May Soe Yu ၊ M.ID ၏တည်ထောင်သူနှင့် ဒီဇိုင်းဒါရိုက်တာဖြစ်သူ Mya Myitzu ၊ British Chamber of Commerce, Myanmar ၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်သူ Peter Crowhurst ၊ MAA Group Consulting Engineers ၏ အဖွဲ့ဝင် Moh and Associates, lnc. ၏ ဥက္ကဌဖြစ်သူ Richard Moh ၊ STKT Consultants Co Ltd မှ Principal Design Engineer ၊ အတိုင်ပင်ခံနှင့် Project Manager ဖြစ်သူ Dr Soe Thein နှင့် Spine Architects ၏ တည်ထောင်သူနှင့် Principal Architect ဖြစ်သူ Stephen Zawmoe Shwe တို့ပါဝင်ထားပါသည်။
PropertyGuru Myanmar Property Awards in partnership with Shwe Property ဆုချီးမြှင့်ပွဲကြီးကို Platinum Sponsor အဖြစ် Hitachi Elevators and Escalators ၊ Silver Sponsor အဖြစ် Porcelanosa ၊ တရားဝင် Portal မိတ်ဖက်နှင့် Associate Partner အဖြစ် ShweProperty.com ၊ တရားဝင်မဂ္ဂဇင်းအဖြစ် PropertyGuru Property Report ၊ တရားဝင်သတင်းစာအဖြစ် The Straits Times Myanmar ၊ မီဒီယာမိတ်ဖက်များအဖြစ် Myanmar Home & Décor ၊ Myanmar Real Estate & Construction Monitor ၊ Myanmar Insider နှင့် Myanmar Times ၊ တရားဝင် Charity မိတ်ဖက်အဖြစ် Right to Play ၊ တရားဝင် ESG မိတ်ဖက်အဖြစ် Baan Dek Foundation ၊ တရားဝင် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး မိတ်ဖက်အဖြစ် Klareco Communications ၊ ထောက်ပံ့ကူညီပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများအဖြစ် AustCham Myanmar နှင့် British Chamber of Commerce Myanmar ၊ တရားဝင်ကြီးကြပ်သူအဖြစ် BDO တို့က ဆောင်ရွက်ထားပါသည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက အီးမေးလ်လိပ်စာ [email protected] သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည် သို့မဟုတ် AsiaPropertyAwards.com သို့ ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်သည်။
ဆုရရှိသူများနှင့် အထူးဂုဏ်ပြုဆုရရှိသူများ စာရင်းအပြည့်အစုံ
DEVELOPER AWARDS (ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်ဆုများ)
Best Developer (အကောင်းဆုံးဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်ဆု)
ဆုရရှိသူ – Capital Development Ltd.
Best Breakthrough Developer (အကောင်းဆုံးဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်သစ်ဆု)
ဆုရရှိသူ – SCW Development Group Ltd
အထူးဂုဏ်ပြုဆု – Ayeyarwaddy Development Public Co., Ltd.
Best Commercial Developer(အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးသုံးဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်ဆု)
အထူးဂုဏ်ပြုဆု – Sun Myat Tun Construction Co.,Ltd.
Best Mixed Use Developer (အကောင်းဆုံး ဘက်စုံသုံးဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်ဆု)
Best Industrial Developer (အကောင်းဆုံး စက်မှုလုပ်ငန်းဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်ဆု)
ဆုရရှိသူ – Dagon International Limited
Best Lifestyle Developer (အကောင်းဆုံး လူနေမှုပုံစံဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်ဆု)
ဆုရရှိသူ – Elite World Trading Co., Ltd
Best Sustainable Developer (အကောင်းဆုံး ရေရှည်တည်တံ့သည့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်ဆု)
DEVELOPMENT AWARDS (အကောင်းဆုံးဆောက်လုပ်ရေးဆုများ)
Best Luxury Condo Development (အကောင်းဆုံး ဇိမ်ခံကွန်ဒိုဆု)
ဆုရရှိသူ – SCW Development Group Ltd. ကဆောက်လုပ်သော Skysuites
အထူးဂုဏ်ပြုဆု – MOON SUN CO., LTD. ကဆောက်လုပ်သော Merchant Luxury Condominium
Best Housing Development (အကောင်းဆုံးအိမ်ရာဆု)
ဆုရရှိသူ – Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Company Limited ကဆောက်လုပ်သော Gyogone Housing Redevelopment
Best Township Development (အကောင်းဆုံး မြို့နယ်ဆောက်လုပ်ရေးဆု)
ဆုရရှိသူ – Ayeyarwaddy Development Public Co., Ltd. ကဆောက်လုပ်သော Pathein Industrial City
အထူးဂုဏ်ပြုဆု – Thilawa Property Development Limited ကဆောက်လုပ်သော Thilawa Garden City
Best Mixed Use Development (အကောင်းဆုံး ဘက်စုံသုံးအဆောက်အဦးဆု)
ဆုရရှိသူ – Meeyahta Development Limited ကဆောက်လုပ်သော Yoma Central
အထူးဂုဏ်ပြုဆု – Capital Development Ltd. ကဆောက်လုပ်သော Mandalay Financial Center
အထူးဂုဏ်ပြုဆု – Sun Myat Tun Construction Co., Ltd. ကဆောက်လုပ်သော Mingalar Market Project
Best Industrial Development (အကောင်းဆုံး စက်မှုလုပ်ငန်းဆောက်လုပ်ရေးဆု)
ဆုရရှိသူ – Dagon International Limited ကဆောက်လုပ်သော New East Dagon Industrial Estate
အထူးဂုဏ်ပြုဆု – Ayeyarwaddy Development Public Co., Ltd. ကဆောက်လုပ်သော Pathein Industrial City
Best Office Development (အကောင်းဆုံး ရုံးခန်းအဆောက်အဦးဆု)
ဆုရရှိသူ – Capital Development Ltd. ကဆောက်လုပ်သော Mandalay Financial Center
အထူးဂုဏ်ပြုဆု – Meeyahta Development Limited ကဆောက်လုပ်သော Yoma Central
Best Heritage Renovated Property (အကောင်းဆုံး ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ် ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ဆု)
ဆုရရှိသူ – Anawmar Art Group ကပြုပြင်ထိန်းသိမ်းထားသော Secretariat Yangon
Best Retail Development (အကောင်းဆုံး လက်လီလုပ်ငန်း ဆောက်လုပ်ရေးဆု)
Best Wellness Development (အကောင်းဆုံး ကျန်းမာရေးအဆောက်အဦဆု)
ဆုရရှိသူ – Elite World Trading Co., Ltd ကဆောက်လုပ်သော Imperial Clinic
Best Entertainment Development (အကောင်းဆုံး ဖျော်ဖြေရေးအဆောက်အဦးဆု)
ဆုရရှိသူ – Factory to Home Company ကဆောက်လုပ်သော Woodland X Bar
DESIGN AWARDS (ဒီဇိုင်းဆုများ)
Best Entertainment Interior Design (အကောင်းဆုံး ဖျော်ဖြေရေးအတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းဆု)
BEST OF MYANMAR AWARDS (မြန်မာ့အကောင်းဆုံးဆုများ)
Best Condo Development (Myanmar) (အကောင်းဆုံးကွန်ဒိုဆု – မြန်မာ)
Best Housing Development (Myanmar) (အကောင်းဆုံးအိမ်ရာဆု – မြန်မာ)
SPECIAL RECOGNITION AWARDS (အထူးအသိအမှတ်ပြုဆုများ)
Special Recognition for ESG (သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမှုရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအတွက် အထူးအသိအမှတ်ပြုဆု)
Special Recognition for CSR (Corporate Social Responsibility အတွက် အထူးအသိအမှတ်ပြုဆု)
ဆုရရှိသူ – Ayeyarwaddy Development Public Co., Ltd.
Special Recognition for Sustainable Construction (ရေရှည်တည်တံ့သည့် ဆောက်လုပ်ရေးအတွက် အထူးအသိအမှတ်ပြုဆု)
Special Recognition for Building Communities (လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ ထူထောင်ခြင်းအတွက် အထူးအသိအမှတ်ပြုဆု)
ဆုရရှိသူ – Sun Myat Tun Construction Co., Ltd.
PUBLISHER’S CHOICE (ထုတ်ဝေသူ၏ ရွေးချယ်မှု)
Myanmar Real Estate Personality of the Year (မြန်မာ့တစ်နှစ်တာ အိမ်ခြံမြေပုဂ္ဂိုလ်ဆု)
ဆုရရှိသူ – ဒေါ်ဝင်းဝင်းတင့် ၊ Group CEO ၊ City Holdings Limited
Previous Previous post: “မာရာဒိုနာ” ဆိုတာ အာဂျင်တီးနား အလံတော်ပါပဲ
Next Next post: ထိုင်းအနုပညာနယ်ပယ်က ထိုင်း တရုတ်ကပြား မင်းသားချောများ